Isniin, November 19th 2018 (AminaWehelie)-Gobolka Banaadir waa gobolka kali ah oo wadanka Soomaaliya caanshuurta ugu badan laga qaado, ku dhowaad 45 milyan oo doolarka Mareykanka (45.000.000 Milyan USD) ayaa sanadkii ka soo xeroota ilaha canshuuran ee gobolka, hase yeeshee waxeey gashaa canshuurtaasi gacanta dowladda federaalka ah, waxna loogama soo celiyo gobolka iyo dadka degganba.
Waxaa intaas dheer in gobolka oo ay ku nool yihiin tiro ka badan saddex milyan oo qof (3.000.000 oo qof), kuwaasoo la dafiray in ay yeeshaan maamul u gaar ah sida gobollada kale.
Daawo wareysi xog-bixin ah oo ay Tv-ga RTN siiyeen labada aqoonyahay ee kala ah Cabdullaahi Mahdi Xuseen iyo Cali Cabdi Geelle.
Waresiga waxaa qaaday, wariye sare Cadirisaakh Socoto.
Muuqaalka xuquuqdiisa waxaa leh (RTN Somali tv).
Posted in HOME, NEWS, VIDEO
Previous Xasan Sh. Maxamuud oo Kismaayo tagay
Next Yaan uga dacwoonaa?
2 thoughts on “Gobolka Banaadir: dulmanaha gobollada Soomaaliya.”
Abdihorsed Ali Abdi says:
Waa xog dhameystiran kana turjumeysa xaqiiqada dhabta ah.
Ahmed Adow says:
November 20, 2018 at 09:55
Waxaa ka jiifo dadka kasoo jeeda gobolka oo hadey u hadlaan ku waayaya siyaasada ay ka leeyihiin iney dawladii timaado ka helaan kursi waana helaa xaquuqda uu leeyhy gobolka ha dheeraato iinsha alaah waxa ay rabtaa baraarujin dheeraad ah